Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. dia orinasam-pamokarana sy fikirakirana matihanina amin'ny vokatra plastika, tavoahangy plastika, tavoahangy kosmetika, tavoahangy simika isan'andro, boaty plastika, plastika plastika, tohana plastika plastika, fonosana plastika ary vokatra hafa, miaraka amina rafitra fitantanana kalitao feno sy siantifika. Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. ny tanjaka sy ny kalitaon'ny vokatra no eken'ny indostria.
Ny orinasanay dia nanangona mpikaroka siantifika ambony sy kalitao avo lenta, nanamboatra laboratoara fitiliana miasa tanteraka. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny toekarena amin'ny tsena, amin'ny alàlan'ny vokatra avo lenta, serivisy tsara ary laza tsara, dia raisinay tsara ny mpanjifa.
"Kalitao, mpanjifa aloha, laza, fiaraha-miasa amin-kitsimpo"
Ny orinasa dia nanangana ny rafitra tambajotra varotra anatiny sy iraisam-pirenena, nanamafy ny ekipa varotra matihanina ao an-trano sy any ivelany, nanokatra ny tsena anatiny sy ivelany, ary manana mpiara-miasa maro any Eropa, Amerika ary Azia hanitatra ny orinasa.
Ny vokatray & milina
Tao anatin'ny roa taona lasa dia nanambola vola be ny orinasa hanatanterahana fanovana ara-teknika lehibe. Ny tranon'ny orinasa dia noforonina sy namboarina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny GMP amin'ny fitantanan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina ho an'ny famokarana zava-mahadomelina, ary ny atrikasa famokarana dia nahatratra ny fenitra indostrialy fivarotana fanafody ambaratonga 10.000 sy fanadio tontolo iainana 100,000.
Ary ny fampidirana ny tsindrona an-trano mitsoka poakaty ary ny milina famolavolana plastika ary ny milina fanamafisam-peo plastika, ny masinina akorandriaka supositoria ary ny fitaovana famokarana hafa, ary koa ny infrared, spectrophotometry ultraviolet, ny fandanjalanjana fandanjalanjana fitaovana elektronika avo lenta.
Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. dia nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny fisoratana anarana momba ny fonosana sy ny kaontenera fonosana indostrialy avy amin'ny fitantanan'ny sakafo sy ny zava-mahadomelina avy amin'ny fanjakana.
Izy io dia afaka mamokatra fitaovana fonosana sy fitoeram-panafody haingam-pandeha isan-karazany
kaontenera fonosana sakafo sy kosmetika vaovao
faritra atsindrona plastika isan-karazany
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fonosana kosmetika sy ny indostrian'ny fonosana tavoahangy isan'andro hanitatra, manana traikefa amin'ny famokarana manan-karena sy haitao matihanina mahafinaritra, amin'izao fotoana izao noho ny filan'ny mpanjifa ihany koa dia manome fitsaboana manokana, ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
Ny orinasanay dia nanangona mpikaroka siantifika ambony sy kalitao avo lenta, nanamboatra laboratoara fitiliana miasa tanteraka. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny toekarena amin'ny tsena, amin'ny alàlan'ny vokatra avo lenta, serivisy tsara ary laza tsara, dia raisinay tsara ny mpanjifa. Ny orinasa dia nanangana ny rafitra tambajotra varotra anatiny sy iraisam-pirenena, nanamafy ny ekipa mpivarotra matihanina ao an-trano sy any ivelany, nanokatra ny tsena anatiny sy ivelany, ary manana mpiara-miasa maro any Eropa, Amerika ary Azia hanitatra ny orinasa. Amin'izao fotoana izao, mba hampiroboroboana ny tsena any ampitan-dranomasina, ny orinasa dia hanome ny mpanjifa any ivelany fitsaboana tsara sy fanampiana, mandray an-tsitrapo ny ankamaroan'ny mpanjifa any ivelany mba hanantona azy.
Fitantanana famokarana hentitra, fitaovana sy haitao mandroso, kalitaon'ny vokatra, fanajana ny fifanarahana ary mendri-pitokisana, ny ankamaroan'ny mpanjifa matoky sy mandray, ny karazan-vokatra rehetra dia amidy ao an-trano sy any ivelany, mandray tsara ireo mpanjifa vaovao sy taloha ao an-trano sy any ivelany mba hifampiraharaha orinasa
Fampidirana ny tantaran'ny fampandrosoana ny orinasa
Efa nandroso isika.
Atrikasa fanadiovana naoty iray hetsy
Atsangano ny departemantan'ny fanaraha-maso kalitaon'ny orinasa hanao fitiliana kalitaon'ny zavamaniry isaky ny vokatra avy amin'ny orinasa.
Manampia tsipika mitsoka tavoahangy 5 mandeha ho azy
Atsofohy ao anaty fitaovana blister, manangana atrikasa blister.
Sampan-draharahan'ny varotra vahiny, mampivoatra ny tsenan'ny varotra ivelany.
Ny rafitra fandaminana ny orinasa dia namboarina be. Niorina ireo sampana sy sampana maromaro.
Nalefa tany amin'ny firenena maro izy io ary nanangana rafitra fandraharahana ara-barotra marin-toerana.